Mushahar Kordhinta Sannadka Cusub Ee Shaqaalaha & Ciidamada: W/Q Cabdiraxmaan Cadami | Cadceed newssite
Lacagahaas isu gayntoodu waxay ka badan karta mushaharka shaqaalaha iyo ciidamada marka loo kordhiyo 100%. Wali kuma filna marka loo eego heerka nolosha magaalooyinka iyo qiimo dhaca shillinka Somaliland, hase ahaatee waa wax tar hor leh oo lagu sugi karo inta dib loo habaynayo dhaqaalaha dalka iyo siyaasadda lacagaha oo markaa loo sii kordhin karo.
Waxa hubaal ah in dhaqaalaha dalku inagu filan yahay haddii cashuuraha sidooda loo qaado Musuqmaasuqana si dhab ah loola dagaallamo, islamarkaana miisaaniyadda loo qoondeeyo sida ugu haboon iyo meeliba meesha ay kaga haboon tahay.
Muwaadin Somaliland dhaqaale xumo ma hayso ee waxa isu raacay maamul xumo, musuqmaasuq iyo xilkasnimo darrada masuuliyiintii Qaranka.
Qalinka: Cabdiraxmaan Cadami